Wafdi Ka Socda Itoobiya Oo Kusoo Wajahan Magaalada Muqdisho | SMC
Home WARARKA MAANTA Wafdi Ka Socda Itoobiya Oo Kusoo Wajahan Magaalada Muqdisho
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa inay soo gaaraan Wafdi ka socda dowladda Itoobiya, kuwaasi oo saacadaha soo socda Safar booqasho ah ku imaanaya Magaalada.
Wafdigan ka socda Itoobiya ee imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa ka kooban ku dhawaad 10 Wasiir oo ka tirsan Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed.
Sidoo kale Wafdigaan ayaa warar la helayo waxaa ay sheegayaan in maalinta berri ah ay imaan doonaan Muqdisho, waxaana Ujeedkoodka uu yahay sidii ay u dardar gelin lahaayeen qodobadii ay dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku heshiiyeen Sanadkii hore.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo sanadkii 2018 booqasho rasmi ah ku yimid Magaalada Muqdisho ayaa xiligaas kulan uu la qaatay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen in la fuliyo qodobo muhiim ah, kuwaasi oo lagu dardar gelinayo xariirka u dhexeeysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
Previous articleSawirro: Xisbiga Roobow oo maanta dhigay banaanbax lagu dalbanayo caddaalad